Izindatshana zikaTunio Zafer zivuliwe Martech Zone
Imibhalo nge UTunio Zafer
U-Tunio Zafer uyi-CEO ye pCloud AG - inkampani ethuthukisa futhi inikeze inkundla yokugcina i-pCloud. Uneminyaka engaphezu kwengu-18 yokuphatha kanye nesipiliyoni sokumaketha emkhakheni wezobuchwepheshe, futhi ubambe iqhaza ezinhlelweni eziningi zebhizinisi eziphumelelayo ezifana ne-MTelekom, Host.bg, Grabo.bg, Mobile Innovations JSC namanye. Njengomholi nomphathi wenkampani yokugcina amafu, u-Tunio ukhuthaza ukuqanjwa kabusha ezindaweni ezifana nokuphepha kanye nokusebenza kahle kwezindleko kubasebenzisi bokugcina. U-Tunio ukhuthaza ukucabanga phambili kulo lonke iqembu lakhe, esebenzela ukwenza umthelela omkhulu emakethe ye-IT ekhula ngokushesha, kubantu ngabanye namabhizinisi ngokufanayo.
5 Ukucatshangelwa Lapho Ukhetha Isitoreji Samafu Ukuze Ukhulise Ukubambisana Nokukhiqiza
NgoLwesithathu, Novemba 17, 2021 NgoLwesithathu, Novemba 17, 2021 UTunio Zafer
Ikhono lokugcina amafayela ayigugu njengezithombe, amavidiyo nomculo ngaphandle komthungo emafini liyithemba elihehayo, ikakhulukazi ngenkumbulo encane (uma kuqhathaniswa) kumadivayisi eselula kanye nezindleko eziphakeme zememori eyengeziwe. Kodwa yini okufanele uyibheke lapho ukhetha isitoreji samafu nesisombululo sokwabelana ngefayela? Lapha, sihlukanisa izinto ezinhlanu okufanele wonke umuntu azicabangele ngaphambi kokunquma ukuthi uzoyibeka kuphi idatha yakhe. Ukulawula - Ingabe ngiyalawula? Okukodwa kwe
Ucwaningo lwabathengisi kanye nabaphathi abakhulu ehlobo luthole ukuthi amaphesenti ayisihlanu kuphela awatholanga okuhle empilweni nge-lockdown - futhi akekho noyedwa umuntu owathi bahlulekile ukufunda okuthile ngaleso sikhathi. Futhi ngesidingo esibonwayo se-pent-up somsebenzi wokumaketha ngemuva kokuvalwa kwentwasahlobo, kunjalo. Kwi-xPlora, inkampani yokumaketha neyedijithali ezinze eSofia, eBulgaria, amandla okwabelana ngamafayela wedizayini